पचास सैयाको अस्पतालको एक्सरे मेसिन कार्यालय सहयोगीको भरमा - Vision Khabar
पचास सैयाको अस्पतालको एक्सरे मेसिन कार्यालय सहयोगीको भरमा
प्रकाशित मितिः बुधबार, चैत्र २०, २०७५ || 108 Views || |
जाजरकोट । जाजरकोट जिल्ला अस्पतालको एक्सरे मेसिन कार्यालय सहयोगीले चलाउने गरेको खुलेको छ । एक्सरे चलाउने दुई जना स्वास्थ्यकर्मी विदामा बसेपछि एक्सरे सेवा सहयोगीले चलाउने गरेका हुन् । एक्सरे चलाउने रेडिग्राफर मेडिना शाही र डार्क रुम असिष्टेन्ट सुनिता पुन दुवै जना एकै पटक विदामा बसेपछि कार्यालय सहयोगी रमेश वलीको भरमा एक्सरे सेवा संचालन भैरहेको छ ।
डार्क रुम असिष्टेन्ट सुनिता गत चैत्र २ गते छोरी विरामी भएको भन्दै विदामा बसेकी हुन । उनी विदामा बसेको बेला ८ चैत्रमा रेडियोग्राफर मेडिना पनि आफुलाई सञ्चो नभएको भन्दै विदामा बसेपछि एक्सरे सेवा प्रभावित भएको हो । दुवै जना विदामा गएपछि एक्सरे सेवा बन्द छ । फुर्सदको बेला कार्यालय सहयोगी वलीले मेसिन चलाउँछन् भने उनी अन्य काममा ब्यस्त भएको बेला एक्सरे सेवा नै बन्द हुने गरेको भेरी नगरपालिका ३ का बुद्धिबहादुर खत्रीले बताए । ‘एक्सरे जस्तो गम्भिर प्रकृतीको काम कार्यालय सहयोगीले गर्दा सेवा प्रवाह कति भरपर्दो होला’ उनले भने ‘अस्पतालमा हदै सम्मको लापरवाही छ ।’
दैनिक एक्सरेका लागि गएका विरामीहरु कर्मचारी नहुँदा घण्टौ कुर्नु परेको नलगाड ८ का पुर्ण शाहीले बताए । अस्पतालको सरसफाइ देखि एक्सरे सम्मको काममा कार्यालय सहयोगीलाइ लगाउँदा विरामीले निर्धारित समयमा एक्सरे सेवा लिन नपाएको गुनासो गरेका छन् । ५० शैयाको भनिएको यो अस्पतालमा सामान्य शल्यक्रिया सेवा संचालन भएपनि अन्य सेवा प्रभावकारी नहुँदा उपचार सेवा प्रभावित हुने गरेको छ ।
अस्पतालका निमित्त प्रमुख डा. केशर कार्कीले सुनिताको छोरी विरामी भएर विदामा गएको र मेडिना आफै विरामी भएपछि उनीहरु विदामा बस्दा सेवा प्रभावित भएको बताए । ‘स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवा प्रभावित नहुने गरी विदामा बस्न आग्रह गरिएको थियो । रेडियोग्राफर मेडिना विहिवार नै फर्कने गरी गएपनि हाल सम्म फर्केकी छैनन् । सेवा बन्द नै गर्नु भन्दा मेसिन नलाउन सिकेका सहयोगीलाई केही दिन एक्सरे चलाउन लगाईएका हौ’ डा. कार्कीले भने ‘केही दिनमै यस्तो समस्याको समाधान गछौ ।’
डिजिटल संचार बाट
गर्मीमा खरबुजा सेवनबाट हुने फाइदाहरु
किन आवश्यक छ बालबालिकालाई व्यायाम ?
भेरी नगरपालिकाद्धारा डल्फिन सफ्टवेयर जिल्ला अस्पताललाई हस्तान्तरण
PREVIOUS POST Previous post: बारा-पर्साका पीडितका लागि जाजरकाेटका युवाहरुले गरे राहत संकलन
NEXT POST Next post: गाउँपालिका अध्यक्ष कुटिए